China oluzenzekelayo umatshini imaski abantwana mveliso kunye nabenzi | Ukuncwina
Zenzekelayo umatshini imaski
Isigqubuthelo sabantwana esizenzekelayo esipheleleyo kumatshini omnye luhlobo olutsha lwezixhobo ezenzelwe abathengi ukuba bavelise iimaski zekhathuni zaseJapan. Isebenzisa i-1 ~ 4 yeengqimba ze-PP ezenziwe ngelaphu ezingalukanga, zasebenza zecarbon kunye nezinto zokucoca njengezinto zokondla. Imaski yenziwe yitekhnoloji ye-ultrasonic. Imaski ine-embossing ecacileyo, i-welding eyomeleleyo kunye nesantya esikhawulezayo, esihlangabezana neemfuno zomsebenzi wemveliso. Uyilo lwesigqumathelo ngokungqinelana nemilinganiselo yovavanyo yaseYurophu naseMelika, kwaye isebenza ngokuzenzekelayo. Umatshini uphela ubunjwe ngesakhelo sezinto, ubumba, iwelding lug, ukusonga iwelding kunye nezinye izinto. Umatshini wokuzenzekelayo wabantwana unokuvelisa kuphela iimaski ezilahlwayo, kodwa hayi i-N95 kunye neemaski zestereo.
Nokuba imaski yeyonyango ayinanto yakwenza nomatshini. Isigqumathelo esiveliswe sesi sixhobo sinokusetyenziswa njengemaski yotyando ukuba nje intsholongwane. Lo matshini wamkela i-PLC yokulawula isikrini. Ibhanti yokuhambisa ephambili ihanjiswa yimoto yesigaba esinye, imoto inyathela ivuliwe, ukuhambisa kuchanekile, ulawulo luzinzile, kwaye isantya sihlengahlengiswa
1, Isiphumo iwelding kulungile kwaye izinga ukusilela liphantsi;
2, Isantya imveliso kakuhle, kunye neepilisi 80-100 ngomzuzu, ezinokuveliswa ngokuqhubekayo iiyure ezingama-24;
3, ikhompyutha PLC ulawulo lwenkqubo, servo drive, iqondo eliphezulu esizisebenzelayo;
4, ujongano lomntu ongumatshini womatshini, izixhobo ezingaqhelekanga kunye ne-alamu yokunqongophala, isikhokelo sescreen sokujongana nokungaqhelekanga ngokukhawuleza.
Igama lemveliso umatshini imaski abantwana oluzenzekelayo Ubungakanani bezixhobo L3600xW3500XH2000 （mm）
Imodeli yemveliso I-SYK-650B uxinzelelo 5 ~ 8kg / cm²
I-AC 220 V 12 A
Izixhobo zamandla 2700W
ukusebenza kwemveliso 50 ~ 70pcs / min Izixhobo ubunzima ≤3000kgMalunga ne-3000kg
Uluhlu lwamalungu aqhelekileyo enxitywa
Ibhulorho yokusika impumlo
1 Iinyanga ezi-3
2 Iinyanga ezi-3
Intloko ye-Lug welding
4 Iinyanga ezi-3
2 Iinyanga ezi-6
Ibhanti yeHummer ibhanti ephathekayo
3 Iinyanga ezi-3
NSK / Japan Japan NTN
Ukuqaliswa kwezilungiso (ngokuzithandela)
Umatshini wesakhelo se-roller yinkqubo yokulungisa i-servo eqhutywa ngumsebenzi opheleleyo wokuchukumisa isikrini. Isetyenziselwa ngokukodwa ukulandela umda wempahla, umgca wokulandela kunye nesidanga sokuthelekisa. Kufanelekile kulawulo oluzenzekelayo lokulungisa ukuphambuka phakathi kwezinto eziqengqelekayo. Ukuphambuka kwezinto kubalwa nge-ultrasonic, infrared kunye ne-CCD sensors, kwaye isiphumo siqhutywa sisiphumo. Imoto kunye nengxelo yekhowudi zisetyenziselwa ukulungisa izinto ezichanekileyo ngokuchanekileyo, ikakhulu zisetyenziselwa ileyibheli engalukwanga umgca wokuvelisa ii-napkins, ushicilelo lwe-flexo, ukwenza iibhegi kunye namanye amashishini.
1.servomotor self-yokufunda: qala umatshini kwisimo semanyuwali, chukumisa imowudi "inkqubo yokuseta isitshixo sokutshintsha" kwiiparameter zenkqubo ukuseta ujongano oluphambili, cofa "iqhosha lokuchonga ngokuzenzekelayo" ukuqala ekufundeni. Imoto iya kubaleka ibuye umva, kwaye ifunde umthwalo kunye nokubetha ngokuzenzekelayo, ukuze ufumane eyona meko yokusebenza. Emva kokugqitywa, umlawuli uya kubuyela kwimeko "yesandla".
Cinezela 2.manual state "iqhosha", lungisa ukuphambuka liza kuhamba ngasekhohlo, cofa iqhosha "lasekunene", lungisa ukuphambuka okuya ngasekunene, ukuba icala elichaseneyo, cofa "inkqubo yokusetha isitshixo sokutshintsha" iqhosha lokungena "inkqubo yokumisela inkqubo ", Cofa ku" motor set button "ukuze uqhubeke notshintsho kwicala lesandla, emva koko ucinezele" ukuphuma kuseto qhosha "ukuyeka, Emva koko isikhokelo solawulo sitshintshiwe
3.ngenisa i "ulungiso oluzenzekelayo" urhulumente, misela ukuba ngaba ulwalathiso oluzenzekelayo luchanekile, ukuba ulwalathiso luchasene, tshintshela kurhulumente "ngokulungiswa kwencwadana", ngokwe "setha ngokuzenzekelayo imeko yemoto kunye nokujika okungalunganga" ulwalathiso oluzenzekelayo luya kutshintshwa.
Inkqubo yesi-4 yolungiso lwenyathelo inokuqhuba ngesiqhelo, imeko "yokulungiswa kwemanyuwali" inokusekwa "yiparameter yokutshintsha amaqhosha" kwi "system parameter setting master interface". Iiparameter ezihambelanayo zinokuhlengahlengiswa, kwaye uhlengahlengiso lobuntununtunu ngokubanzi alukhuthazwa ukuba lube lukhulu kakhulu okanye lincinci kakhulu.
1 Izinto zokumisa ngxi: Lo msebenzi ukwimo "ezenzekelayo". Xa izinto zigqabukile ngesiquphe okanye zigqiba ukusebenza, ukulungiswa akuyi kubaleka kude kube sekupheleni, kodwa kuya kulibaziseka kangangexesha elithile (ixesha lokulibazisa lingasetwa). Isinxibelelanisi sokusetwa kolawulo sisetelwe ku "Vuliwe" xa isixhobo sinqunyanyisiwe.
2 ulawulo lwangaphandle: lo msebenzi ulawula "ngokuzenzekelayo" kunye "nencwadana" yokutshintsha imiqondiso yangaphandle, xa u- "auto" kunye no "COM" benxibelelana ngokufutshane, Tshintshela ku "othomathikhi" kwaye utshintshele ku "manual" xa unqanyuliwe. Eli nqaku lenza ukulungiswa kwe-offset ukutshintshela "ngokuzenzekelayo" njengoko isixhobo siqhuba, siyeke ukutshintshela kwi "manual" kwaye siba nobukrelekrele ngakumbi. Lo msebenzi ufuna ukulawulwa ngaphandle kunxibelelwano lolawulo olukude.
Isiphumo seAlarm: lo msebenzi ukwindlela yokulungisa ukwenzeka komda, ukulayisha ngaphezulu, ngaphezulu kwemeko zangoku nezinye iimeko, ukudluliswa kuya kuvalwa ukubonelela ngomqondiso wokuma ngaphandle.
Iimpazamo eziqhelekileyo kwisiHlomelo kunye nezisombululo zazo
Akukho mfanekiso emva kombane, kwaye umboniso awukhanyisi Jonga ukuba imveliso ye-DC24V iqhelekile, jonga ukuba ingaba intambo yombane ikwimeko elungileyo na, nokuba iplagi yamandla ikudibaniselwano oluhle na, nokuba Unxibelelwano luchanekile okanye hayi, emva koko uluplagi kwakhona.
2.IDrayivu ayinakunciphisa indawo
1) khangela ukuba unxibelelwano luchanekile kwaye indibaniselwano inonxibelelwano oluhle, iplagi kwaye uphinde uphinde ubuye
2) .Ngokuya kwe "system parameter setting switch switch", imowudi yokulungisa imanyuwali ishenxiselwa kwinkqubo ephambili, kwaye ucofe "iqhosha lokuqonda ngokuzenzekelayo" ukuqala ukuzifundela. Imoto ye-servo kukuzifundela.qaphela ukuba ngaba lukhona naluphi na utshintsho kwixabiso leetshathi kwindawo yokubonisa iimoto.
3.i drive ayisebenzi
1) khangela ukuba ukudibanisa okanye ukuvumelanisa i-pulley kukhululekile okanye ibhanti liphukile
2) Yahlula i-drive kwindawo yokubeka kwaye ujonge ukuba icandelo loomatshini lixinekile okanye i-drive thrust ayonelanga.
4. Idrive isebenza ngesandla kwaye ngokuzenzekelayo kwicala elinye
1) Khangela ukuba i-wiring ye-sensor ichanekile.
2) Sebenzisa isixhobo ukuvimba inzwa ukubona ukuba ungatshintsha indlela, ukuba unako, ukutshintshela ubungqongqo kuya kuba yinto eqhelekileyo
3) Jonga ukuba umgca womenzi woluvo ukhululekile okanye wophukile.
4) Jonga ukuba ukhetho lwenzwa luchanekile?
I-Ultrasonic AE-210 ilungele zonke izinto ngaphandle kwemingxunya
I-infrared AE-100 ilungele izixhobo ezinemingxuma (Qaphela ukuba ayinakufakwa kwilanga ngqo)
Umbala we-optoelectronic AE-90 ulungele ukulandela umbala kwizixhobo ezinesantya esiphantsi
Umfanekiso we-CCD AE-400 ulungele izixhobo eziphakathi neziphezulu, ezinje ngomda, umgca, umbala, njl.
5) .Ijitter yomqhubi inkulu kakhulu. Iqhubekekisa imo: Ixabiso lokufumana ixabiso liyancitshiswa kunxibelelwano lokufumana.
5 Ukulungisa i-roller ukujikeleza naphambili ukujija okukhulu okanye ukungakhathali: jonga ukuba ngaba izinto ziyatyibilika kuluhlu, zinokunyusa uxinzelelo okanye zonyuse ukungqubana kwiroli; inzuzo inokuhlengahlengiswa; isivamvo sinokuba kufutshane kangangoko kunokwenzeka ukuba ujikeleze roll; Jonga umsantsa phakathi komqhubi kunye nenxalenye yoomatshini.
I-mainframe yesixhobo ayisebenzi ngokufanelekileyo xa ingaqalanga kwaye ayinakusebenza emva kokuqalisa
I-1) .Isixhobo sokuvalela imeko yaseburhulumenteni, bonisa ukuphambuka kwezinto kumlawuli, ukwanda kwexabiso lebha yebar
2). jonga ukuba ngaba kukho imithombo yokuphazamiseka ephezulu yamandla kufutshane nomlawuli kunye nesenzi, yodwa kwaye uphinde uzame
3) Qhagamshela izixhobo kwicingo lomhlaba lale mveliso
4) .Jonga ukuba intambo kunye nekhebula lokuqhuba zijikeleze umgca wamandla ombane, nceda uhlukanise uvavanyo
5) .Jonga ukuba intambo yaphukile irabha okanye umfowunelwa embi
6.) heck ukuba i-V- kunye ne-PE ziziphaluka ezifutshane
7.Material electrostatic ingakumbi enkulu: isivamvo kunye isilawuli ngokulandelelana ucingo emhlabeni, isivamvo kangangoko kunokwenzeka wanamathela embindini izinto, kungcono ukongeza izixhobo ukuphelisa electrostatic
Egqithileyo Umatshini wemaski yomdada
Okulandelayo: Imisebenzi kunye neempawu zomatshini wokufihla iintlanzi
Ilaphu leBlue Static Bubble, Umenzi weMaski, Ukupakisha i-Bubble Bag, Umatshini omnye wokuTsala uMatshini omnye, Umatshini weMask yobuso, Ingubo ebomvu yeBhola,